Chikumi 4, 2018 arun
Bittrex achabvumira vanoita kutenga cryptocurrency pamwe US ​​madhora
Vanoita ikozvino vane mukana mutsva kutenga cryptocurrencies muna US madhora.
Bittrex, mumwe Seattle anotsanangura cryptocurrency Exchange, kwasvika chibvumirano kuti unobvumira vanoita kutenga digitaalinen Mari US madhora. Kare, Mari chete vaitengesa pamusoro Coinbase, digital mari mu California, zvinogona kutengwa madhora. Ndizvo chikamu vangasvika 1500 digitaalinen mari akayangarara ari cryptocurrenices zvose.
Kutenga zvimwe mari, vanoita kutanga kutendeutsa mari yavo muchivigiro Bitcoin. Zvino vane Bittrex.
Muvambi uye CEO Bill Shihara akaudza CNBC kuti chinangwa chaiva “kukura misika vakawanda sezvinobvira musi Bittrex,” Akati musi weChishanu “Fast Money.”
“Uyewo kuwedzera nayo, ose mutengi musi Bittrex vachakwanisa kuwana US dhora kutengeserana,” akati.
The Exchange kunogona kukubatsira kuti kufamba pamusika. Sezvo mari zhinji kudaro aigona chete kutengwa kuburikidza Bitcoin, kukosha Bitcoin uye vazhinji nevamwe digitaalinen dzeEurope correlated kunyatsotevera. Kukosha crypto dzakabatana izvi zvino angatanga decouple kubva Bitcoin, Shihara akati, sezvo mamwe makambani mugotenga madhora.
pari zvino, anenge 200 digitaalinen mari akasiyana kunogona mhindu musi Bittrex. The CEO akati kuti “diki, sarudzai uwandu startup vamwe” Achibata pamusika wemari kubhadhara mune madhora.
“Panguva iyi tiri kuedza maitiro edu,” akati. “Tinoshanda takabatana nemabhengi kuti chokwadi vanogona dzinoona Fiat deposits uye withdrawals, uye injini isu kutengeserana tichakwanisa kubata nhumbi zvakanaka.”
Cryptocurrency anoramba kunonyanya unregulated muUnited States, kukonzera masangano akawanda zvemari uye vanoita kuti kungwarira pamusoro Mari serakavakwa kwakapararira kubiridzira uye counterfeiting ICOs. Other vatengesi Vaverenga kumisika marudzi vanopedzisira digitaalinen zvinhu zvakadai Bitcoin.
Kraken Daily Market Mushumo 03.06.2018
Apple co-muvambi Steve Wozniak inotarisira Bitcoin anova chete pose mari
Twitter CEO Jack Dorsey ichangopfuura akati unotenda bitcoin achava chete munyika yose mari, chinhu kuti Apple co-muvambi Steve Wozniak tariro zvichaitika.
“I kutenga mu chii Jack Dorsey inoti, kwete kuti ini hazvo tenda zviri kuzoitika, asi nekuti ndinoda kuti nenzira, kuti kufunga zvakadaro wakachena… Bitcoin ari mathematically kunorondedzerwa, pane vamwe kwazvo bitcoin, pane nzira zviri kuparadzirwa ... uye kwakachena uye hakuna kumhanya dzevanhu, hapana kambani achimhanya uye zviri chete ... kukura uye richikura ... uye kupukunyuka, kuti kwandiri inoti chinhu dzinongoitika uye hunhu kunokosha kupfuura edu eruwa zvose kwevanhu.”
President Russian Kuchibhotla ...
Previous Post:Ethereum Wallet ImToken ane $ 35B mu deposits, kupfuurisa 99% US mabhanga